Kubvira kare, Jehovha ave achida kuti mhuri imwe neimwe ipedze nguva iri pamwe chete, kuti ive noukama hwakasimba naye uye kuti isimbise ukama hwayo semhuri. (Dheuteronomio 6:6, 7) Ndokusaka vhiki nevhiki Zvapupu zvaJehovha zvichiva nenguva yokuti mhuri inamate pamwe chete, ichikurukura yakadekara zvinhu zvinodiwa nemhuri yacho pakunamata. Kunyange uchigara uri woga, nguva yakadaro inogona kushandiswa zvakanaka uina Mwari uchidzidza Bhaibheri panyaya yaunenge wasarudza.
Inguva yokuswedera pedyo naJehovha. “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Tinosvika pakuziva Jehovha zviri nani patinodzidza zvakawanda pamusoro pezvaari uye zviito zvake muShoko rake, Bhaibheri. Nzira iri nyore yokutanga kunamata kwenyu kwemhuri ndeyokushandisa imwe nguva muchiverenga Bhaibheri pamwe chete zvinonzwika, zvimwe muchitevera purogiramu yevhiki yoga yoga yeMusangano weUshumiri Uye Kurarama. Mumwe nomumwe ari mumhuri angapiwa chikamu chokuverenga, uye mose munogona kukurukura zvinhu zvamunenge madzidza kubva muMagwaro.
Inguva yokuti vomumhuri vaswedere pedyo nomumwe nomumwe. Varume nemadzimai, uyewo vabereki nevana, vanosimbisa ukama hwavo pavanodzidza Bhaibheri semhuri. Inofanira kuva nguva inonakidza, ine rugare uye chiitiko chinotarisirwa nomunhu wose womumhuri vhiki imwe neimwe. Zvichienderana nezera revana vavo, vabereki vanogona kusarudza nyaya dzinoshanda dzokukurukura, zvimwe vachishandisa zvikamu zveNharireyomurindi neMukai! kana kuti panzvimbo yedu yepaIndaneti yekubudisira mashoko yejw.org. Munogona kutaura nezvedambudziko rakasangana nevana venyu kuchikoro uye kuti ringakurirwa sei. Munogonawo kuona imwe yemapurogiramu eJW Broadcasting ayo anowanika patv.jw.org, mokurukura zvamunenge maona. Munganakidzwa nokudzidzira nziyo dzichaimbwa pamisangano uye mapedza mova henyu netwokudyira-dyira.
Iyi nguva inokosha inoshandiswa vhiki imwe neimwe pakunamata Jehovha pamwe chete ichabatsira vose vomumhuri kuti vafarire Shoko raMwari, uye achakomborera kwazvo zvamunoedza kuita.—Pisarema 1:1-3.
Nei tichiva neimwe nguva yokunamata kwemhuri?
Vabereki vanogona sei kuita kuti chiitiko ichi chinakidze vose vari mumhuri?
Wanai mazano kubva kune vamwe vari muungano pamusoro pezvavanoita pakunamata kwavo kwemhuri. Uyewo, onai kuti zvinyorwa zvipi zvinowanikwa paImba yoUmambo zvokuti mushandise pakudzidzisa vana venyu nezvaJehovha.